Mya Nandar Enterprise | Antibody Rapid Test Kit (သွေးဖောက်ပြီး စစ်ဆေးသောအရာ) Product
Antibody Rapid Test Kit (သွေးဖောက်ပြီး စစ်ဆေးသောအရာ) Product
Antigen Test Kit (Saliva) (တံတွေးဖြင့်စစ်သောအရာ)
Antigen Rapid Test Kit (နှာခေါင်းတို့ဖတ်ဖြင့်စစ်ဆေးသောအရာ)
Antibody Rapid Test Kit (သွေးဖောက်ပြီး စစ်ဆေးသောအရာ)
ဘယ် Test Kit နဲ့ စစ်မလဲ ?
🔹Antigen or Antibody ?
⏩ Covid ​ဖြစ်နေတာ သိဖို့ အရေးကြီးလား?
⏩ Covid ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ သိဖို့ အရေးကြီးလား?
👉 Covid ရောဂါ ဖြစ်လိုက် မှန်းတောင် မသိလိုက်တဲ့ သူတွေ များစွာ ရှိပါတယ်။
👉အချို့ နေမကောင်းတောင် မဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
အဲလို လူ တွေ က ရောဂါ ဖြစ်နေ စဥ် မှာ မိမိ ဝန်းကျင် က လူများစွာ ကို ကူးစေ ခဲ့သလို ၊ မိမိ ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာလည်း ရောဂါ က အနည်း နဲ့ အများ ကိုဖျက်ဆီး ပြီး ၊ ဖျက်ဆီး နေဆဲ ဆိုတာ ကို သိဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်ပါတယ်။
ယေဘူယျ ပြော ရရင်~
👉 Covid ရောဂါ ပိုး စဝင်ပြီး (Incubation ပိုးပွါးစ ကာလ ၂-၃ ရက် အပြီး)
၃-၄ ရက်ကြာ ရင် Antigen test kits နဲ့ Covid ဖြစ် မဖြစ် စမ်းသပ် နိုင်ပါတယ်။
👉 နောက် ၆-၇ ရက် ကြာရင် (ရောဂါ ပိုး ဟာ အဆုပ် ဆဲလ် များမှတဆင့် သွေး ထဲ ရောက် တာနဲ့) သွေးဖြူဥ ကထုပ်ပေးတဲ့ Antibody (IgM : Immunoglobulin M) ထွက်လာ ပြီး Antigen ကို ရှေ့ပြေး အနေနဲ့ စတင် တွန်း လှန် တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
IgM က သဘာဝအရ အားနည်း တဲ့ သဘောမို့ nCoV-2 Virus Antigen ကို မနိုင် ပါဘူး။
➡️ အဲဒီ အချိန် ကာလ မှာ Antibody IgM test kit နဲ့ စမ်းသပ် နိုင် ပါတယ်။
👉 Antigen ကလဲ ရှိနေ သေး ရုံ မက ရောဂါ က ကူးစက် အနိုင်ဆုံး / အန္တရာယ် အရှိဆုံး most infectious and contagious အချိန် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန် သည် Covid ရောဂါ အတွက် အသိသင့်ဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
👉 အဲဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သဘာဝနဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့ ရောဂါ တုံ့ပြန်တဲ့ စနစ်က နောက် ၃-၄ ရက်အကြာ မှာ Antibody IgG က IgM ကို စစ်ကူ ထွက်တိုက်ပါတယ်။
IgM က အလိုလို တပ်ဆုပ် ပေးပြီး သူ့ ထက် အင်အား ကြီးမားတဲ့ IgG ကို ဆက်တိုက် ခိုင်းပါတယ်။
👉 ရောဂါ လက္ခဏာ စပြပြီး ၉-၁၀ ရက် ခန့် မှာ ရန်သူ Antigen Virus အားလုံး ကျဆုံး ကုန် ပါတယ်။ သဘာဝ အလျောက် မိမိ ခန္ဒာ ကိုယ် အတွင်းထပ် မပွါး တော့ သလို အခြား သူများ ကို ထပ်မကူးစက်နိုင်တော့ပါဘူး။
👉 အဲလို Antibody IgM နဲ့ IgG ပေါ် ရင် Antibody Test နဲ့ စမ်းသပ် နိုင်လို့ ရောဂါ ရထား ပြီးကြောင်း သိနိုင် ရုံ မက အနဲဆုံး ၆ လ မှ ၂ နှစ် လောက်ထိ Covid ရောဂါ ရရှိထား ဖူး တယ်ဆိုတာ ကိုစမ်းသပ် သိရှိနိုင်ပါတယ်။
⏺️ Antigen Test Kits က မစမ်းသပ်နိုင် ပါဘူး ။
⏺️ Antibody Test Kits ကသာ စမ်းသပ် နိုင်ပါတယ်။
👉 Covid (Positive) ဖြစ်နေ တာ သိထား ရင် အခြားလူ တွေ မကူးအောင် ကြိုတင် ဆင်ခြင် နိုင်မယ်။ Quarantine ပို့ ကုသ မှုခံယူ နိုင်မယ်။ (Antigen Test kit နဲ့ စစ်ပါ)
👉 Covid ဖြစ် ထားပြီး ပျောက်ကင်း သွားလို့ (Negative) ဖြစ် နေ ရင်လဲ ရောဂါ ဖြစ်တုန်းက ဖျက်ဆီးထားတဲ့ ခန္တာကိုယ် အစိတ် အပိုင်း (အဆုပ် ၊ နှ လုံး ၊ ကျောက်ကပ် ...) တို့ ကို ပြန်လည် ကုသ ဖို့ ရောဂါ ဖြစ်ထား ခဲ့ဘူး ကြောင်း အမြန် သိဖို့ ကာလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ (Antibody Tedt kit နဲ့ စစ်ပါ)
Lepu Myanmar မှ တင် သွင်း လာတဲ့ Lepu Test Kits များကို Bundle Price "အတွဲ လိုက် အထူး စျေးနှုန်း" နဲ့ ရောင်းချ နေပါပြီ။
Efficient: Test result is available in 15mins